🥇 ▷ Sony Waxay Bilaabaysaa GP-VPT2BT Gacan-Wireless Multifunction-ka Qaadashada Sawirrada Bluetooth ✅
Sony Waxay Bilaabaysaa GP-VPT2BT Gacan-Wireless Multifunction-ka Qaadashada Sawirrada Bluetooth
Laga bilaabo telefishanno cusub ilaa kaamerooyin farsamo oo aad u sareeya, Sony had iyo jeer waxay naga yaabiyaan waxyaabo cusub oo xiiso leh. Qalabkan tikniyoolajiyadda ah ee Sony wuxuu soo ban dhigayaa gacan birla’aanta Bluetooth ku shaqeysa oo la yiraahdo GP-VPT2BT 14-kii Janaayo, 2020. Qabashada toogashadan waxay leedahay adeegyo badan. Si kastaba ha noqotee, tani waa qaali.
Qalabka isku-dhufashada badan wuxuu culeyskiisu gaarayaa 173mm, culeyskiisu waa 215g waana Bluetooth 4.2. In kasta oo xaqiiqda ah in muuqaalka koowaad uu u eg yahay weel caadi ah, dhab ahaantii waxay leedahay muuqaalo yaab leh.
Sony GP-VPT2BT waxaa loo isticmaali karaa iskeelka ‘selfie stick’, soodod, ama kontoroolka wireless-ka ee wireless-ka ah. Isticmaalkiisa dabacsan wuxuu ka dhigayaa mid si aad ah loo dabaqi karo oo qiimo leh.
Aaladda wireless-ka ah ee Bluetooth waxaa loo isticmaali karaa hal kamarad micro ama Sony kaarka madow ee loogu talagalay kamarad gacanta gacanta ku jirta ama sida desktop-ka desktop. Warbixinnada ayaa tilmaamaya in aaladda si tartiib ah ugu wareegi karo oo lagu hagaajin karo inuu isu beddelo saacad-u-isutaallaha iyo jihada toogashada caadiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, GP-VPT2BT sidoo kale waa lagu xiri karaa 90 ° durdadaha tooska ah iyadoo la adeegsanayo wareegga gimbal iyo isku-habeynta xagasha ee durbadaha hore iyo dambe. Qalabkan waxaa ku jira giraan hagaajin oo aan u adeegsan karno kaamirooyinka iskuxiran si xajmi fiican loo helo.
Qalabkaan ‘Sony Wireless Bluetooth Multifunction Shooting Grip Handle’ wuxuu ku qalabeysan yahay badhanka caanka ah ee C1 kaasoo u shaqeynaya sida badhanka caanka C1. Badhamada caadiga ah ee gacanta lagu hayo waxaa ka mid ah badhanka sawir qaadista, badhanka zoom, badhanka dib, iyo badhanka filimka.
Adigoo adeegsanaya badhanka caanka ah ee C1, waxaan si fudud u bedeli karnaa barta diirada ee kamaradda. Xaraashku wuxuu leeyahay tilmaame meesha qufulka qufulku wuxuu sahlayaa in la isticmaalo.
Qabsashada gacanta waxay siisaa xagal weyn qofkasta. Kordhinta baaxada leh waxay u oggolaaneysaa higsasho deg deg ah. Intaa waxaa sii dheer, GP-VPT2BT waxay leedahay naqshad boodh iyo qoyaan leh. Waxay leedahay shaqo jilicsan oo aan caadi ahayn oo, ugu muhiimsan, waa wireless la’aan oo si fudud loo isticmaali karo.
Sony GP-VPT2BT waxaa lagu iibin karaa websaydhka rasmiga ah ee Sony oo ah 900 yuan (kudhowaad $ 130). Si kastaba ha noqotee, hadda waxaa laga heli karaa Shiinaha oo keliya. Waxaan rajeyneynaa inay dhowaan heli doonto qof walba.